व्हीलचेयर सहायक दुबै प्रतिस्थापन र OEM | कर्मान हेल्थकेयर
Karman's® न्यूजलेटर को सदस्यता लिनुहोस् विशेष प्रस्ताव र विशेष पदोन्नति प्राप्त गर्न को लागी!
घर / म्यानुअल व्हीलचेयर / व्हीलचेयर सामान
ब्याकप्याक्स देखि पाउच र कुशन सम्म legrests र प्रतिस्थापन भागहरु, Karman व्हीलचेयर सामान को एक विशाल चयन छ - सबै छुट मूल्य र छिटो ढुवानी मा। हामीले पाएका छौं कि सबै भन्दा राम्रो सामानहरु तपाइँको व्हीलचेयर को लागी आधारभूत कार्यक्षमता र आराम लाई बृद्धि गर्दछ। व्हीलचेयर पाउच एक महान उदाहरण हो, यी पाउच armrests संलग्न र तपाइँको व्यक्तिगत आइटम र सुविधा को लागी एक सुरक्षित क्षेत्र सिर्जना गर्नुहोस्।
हाम्रो cupholds र सीट कुशन सही तपाइँको विशिष्ट गौण को लागी हुनु पर्छ। हाम्रो कुशन विकल्प किनमेल गरेर आराम संग शुरू गर्नुहोस्। त्यसोभए विज्ञापन ons को लागी झोला र अन्य पाउच बोक्न मा सार्नुहोस्। पैर आराम लिफ्ट आराम पनि एक आराम गर्न को लागी तत्काल जोड्ने तरीका हो। नबिर्सनुहोस् कि हामी टाउको आराम संगै छ। यी चीजहरु धेरै धेरै अर्डर हुनेछन् र सबै त्यहाँ बाकस बाहिर सही छ। अरुले यसलाई टुक्रा टुक्रा गरी आदेश दिनेछन् किनकि उनीहरु आफ्नो "उत्तम" कुर्सी बनाउँछन्।
यो साँच्चै एक व्हीलचेयर buidling मा रमाईलो भाग हो। अग्रिम स्तर को केहि पनि भ्यागुता खुट्टा जस्तै आफ्नो कुर्सीहरु को लागी निलम्बन आदेश हुनेछ। केहि कुर्सीहरु क्रोम casters वा spinergy व्हीलचेयर जस्तै फरक रंग छनौट र केहि शीर्ष विज्ञापन ons मा तपाइँको दिमाग उडाउनेछन् जस्तै मोड हुन सक्छ। तर हे यो तपाइँको कुर्सी हो। हामी भन्छौं यो संग रमाईलो छ! यो तपाइँको आज बनाउनुहोस् उत्तम व्हीलचेयर सामान तपाइँ खोजिरहनु भएको छ!
अझै पनी निश्चित छैन कि तपाइँ के खोज्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो सहायक खरीद गाइड मा एक नजर लिनुहोस्, वा हामीलाई 1-626-581-2235 मा एक कल दिनुहोस्; हाम्रो फोन एजेन्टहरु तपाइँ कुनै पनी प्रश्नहरु को जवाफ दिन को लागी उभिरहनुभएको छ।
व्हीलचेयर युनिभर्सल हेडरेस्ट
ब्याट्री र चार्जरहरू
झोला र पाउच
CP4 - ब्याकरेस्ट पाउच
CP2 - आर्म पाउच
BA-U1 युनिभर्सल ब्याट्री
BAT-12 12 भोल्ट
CU-ERGO-Ergonomic मेमोरी फोम
CU-ERGO-BACK फिर्ता मेमोरी फोम